Waa kuwee qoyska reer Glazer? Yaase iska leh milkiyadda saxda ah ee kooxda Manchester United? - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Waa kuwee qoyska reer Glazer? Yaase iska leh milkiyadda saxda ah ee kooxda Manchester United?
May 3, 2021 at 10:32 Waa kuwee qoyska reer Glazer? Yaase iska leh milkiyadda saxda ah ee kooxda Manchester United?2021-05-03T10:32:24+02:00 CAYAARAHA
(Manchester) 03 Maajo 2021. Taageerayaasha kooxda Manchester United ayaa banaan-bax rabshadeysan ka sameeyay shalay garoonka Old Trafford iyagoo sabab u noqday inay baaqato guud ahaan ciyaartii lagu balansanaa inay kooxdooda la ciyaarto Liverpool, waxaana dibad-baxaas fowdada watay looga soo horjeeday qoyska iska leh milkiyadda Red Devils ee Glazer family.
Haddaba waxaan sheekadan ku eegeynaa cidda ay yihiin Glazer Family ama qoyska Glazer iyo shaqsiga madaxda u ah Manchester United.
Joel Glazer waa ganacsade Mareykan ah kaasoo hantidiisa saxda ah lagu qiyaaso hal bilyan oo doolar, waxaana uu qayb ka yahay qoyska magaca dheer ee Glazer Family kuwaasoo leh milkiyadda kooxda ciyaarta NFL-ka ee Tampa Bay Buccaneers iyo naadiga Premier League ka tirsan ee Manchester United.
Joel aabbihii dhalay ee Malcolm Glazer ayaa la wareegay lahaanshaha Man United sanadkii 2005 isagoo xiriir qoto dheer oo adag la yeeshay taageerayaasha taasoo ay ugu wacneyd in qoyska ay bixiyeen deyn badan oo lagu lahaa kooxda qiyaas ahaanna gaareysay 600 milyan oo doolar.
Waxaa haatan maamulka ugu sarreeya ee qoyskan dhanka kooxda heysta Joel Glazer tan iyo markii uu Odey Malcolm geeriyooday sanadkii 2014, waxaana milkiile ahaan uu saxiixay inay Red Devils qayb ka noqoto mashruuca European Super League oo ay ugu dambeyn ka baxeen kaddib markii ay diidmo adag kala kulmeen taageerayaasha kooxdooda.
Si kastaba ha ahaatee, qoyska reer Glazer ayaa haatan wajahaya dhibaato culus kaddib markii ay taageerayaasha ku gooddiyeen inay Manchester United ciyaari karto marka ay jamaahiirta fasaxdo, waxaana loo badinayaa inaysan intaas ku ekaan doonin cadaadiskooda oo ay ku qasbayaan qoyska Mareykanka ah inay iibiyaan kooxda ugu hanashada badan horyaalka Ingiriiska.
« Dalalka Iran iyo Ciraaq oo iska kaashanaya dhanka Tamarta
Wasiir Maxamed Muqtaar :Hadda waxa uu shaki wayn laga Qabo waa Dowladda Federaalka iyo Rooble illa iyo Xadka la Aamini karo »